Vitamin K ဆိုတာ ဘာလဲ? – YANGON STYLE
Vitamin K ဆိုတာ ဘာလဲ?
(ကျွန်မ သားနဲ့ သမီးက Mix Feeding ဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း ဗီတာမင် အားဆေးတွေ ပလူပျံအောင် နာမည်မျိုးစုံနဲ့ စျေးကွက်ထဲရောက်ရှိလာတာမို့ Vitamin – K အကြောင်းကို လက်လှမ်းမီသလောက် လေ့လာမိခဲ့တာလေး မေမေတို့အတွက် ဝေမျှပေးခြင်ပါတယ်)
လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေမှာဆိုရင် “Vitamin” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်- အေ၊ ဗီတာမင်- စီ ၊ ဗီတာမင် – ဘီဝမ်း ဆိုတဲ့ အစရှိတဲ့ ဗီတာမင်တွေက လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ကြားဖူးနားဝဖြစ်ပေမယ့် ဗီတာမင် – ကေ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ နည်းနည်း စိမ်းသလို ရှိနေပါတယ်။
ဗီတာမင်- ကေ ဆိုတာဘာလဲ။ ဗီတာမင်-ကေ ဆိုတာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရပြီး သွေးထွက်လျှင် သွေးတိတ်ပြီး သွေးခဲစေတာ ဗီတာမင်ကေပါ ။ ဗီတာမင်ကေ ချို့တဲ့လျှင် အသေးအဖွဲ ထိရှတာလေးမှပင်သွေးမတိတ်တော့ဘဲ အသေးစားထိခိုက်မှုလေးမှသည် ကြီးကျယ်သော ဒဏ်ရာဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သွေးစိမ့်ယိုခြင်းဟာ ဦးနှောက်လို အစိတ်အပိုင်းမျိုးမှာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် stroke တစ်မျိုးကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ကေ လိုအပ်ချက်က အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများမှာ ပိုမို လိုအပ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဟာ ဗီတာမင်ကေ ကို အူထဲရှိ ဘက်တီးရီးယားများမှ အများဆုံး ရရှိပြီး စားသော အစာများမှလည်း ဗီတာမင်ကေကို အနည်းငယ် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ကေဓာတ် ပါဝင်တဲ့ အစားအစာများကတော့ ပဲသီး ၊ အမဲသား၊ အမဲ အသည်း ၊ ဂေါ်ဖီထုပ် ၊ ဆလပ်၊ ကိုက်လန်၊ မုန်ညင်း ၊ နွားနို့ ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ဘရိုကိုလီ၊ လိမ္မော်သီး ၊ အာလူး ၊ ဟင်းနုနွယ် ၊ စတော်ဘယ်ရီ ၊ ဂေါ်ဖီပန်းပွင့် စသည်တို့မှာ များစွာပါဝင်သလို စားသုံတဲ့ အစားအစာတိုင်းမှာ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဗီတာမင် ကေ ဟာ အဆီမှာ ပျော်ဝင်တဲ့ ဗီတာမင်ဖြစ်တာကြောင့် လိုအပ်တာထက် ပို ပြီးမစားသင့်ပေ။ ဒါကြောင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဟာ အားဆေးဖြည့်စွက်သောက်သုံးဖို့မလိုမအပ်ပါဘူး။
သို့ပေမယ့် မွေးကင်းစကလေးများကတော့ မွေးခါစ အရွယ်မှာ ဗီတာမင်ကေ အင်မတန်နည်းပါးပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးများ ရဲ့ အူဟာလည်း ဗီတာမင်ကေကို ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားများမရှိသေးတာကြောင့် မိခင်နို့ရည်ထံမှ ဗီတာမင်ကေဓာတ် ကို ရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးနို့မှုန့် ဖော်မြူလာများမှာ ဗီတာမင်ကေကို ထည့်သွင်း ဖော်စပ် ထားပေမယ့် နို့မှုန့်တိုက်ကျွေးခြင်းခံရသော ကလေးငယ်များမှာ ဗီတာမင်ကေဓာတ် အင်မတန် နည်းပါးကြပါတယ်။ ဗီတာမင်ကေ နည်းပါးလျှင် သွေးယိုစီးမှု (bleeding) ဖြစ်စေနိုင်ပြီး စိုးရိမ်ဖွယ် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ သွေးယိုစီးမှုက ဦးနှောက်ဆီကို ရောက်သွားလျှင် ဦးနှောက်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းကလည်း အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ နို့တိုက် မိခင်တွေ အနေဖြင့်လည်း ဗီတာမင်ကေ ကို ကလေးတွေစီလုံလောက်စွာ ပို့ေဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အစိမ်းရောင် အသီးအရွက်တွေကို စားသုံးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဗီတာမင် ကေ အားဆေးကို ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ ထိုးပေးလေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ ဗီတာမင်တွေထဲက အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင်ကေ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ သုတတိုးပွား ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။